Farmaajo oo Gedo awgeed u kicinaya fowdo siyaasadeed | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo Gedo awgeed u kicinaya fowdo siyaasadeed
Farmaajo, oo ka careysan qorshe, uu Rooble, gadaal ka riixayo oo ah in doorashada kuraasta taalla Garbahaarrey loo raro Ceel-waaq, ayaa wada abaabulka fowdo siyaasadeed, si ay dib ugu sii dhacaan doorashooyinka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa saacadihii la soo dhaafay dib u billaabay, furfurka heshiisyo ay hore u galeen isaga iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, si uu mar kale u qarxo khilaaf xooggan oo dib u sii dhiga doorashooyinka dalka.
Xogo hoose, oo soo gaaray xaafiiska war-qabadka Keydmedia Online, ayaa sheegaya in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, doonayaan in ay magacaabaan taliyaha hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka [NISA], iyaga oo aan wargalin Ra’iisul Wasaare Rooble, taas oo baal-marsan heshiis hore u dhex maray labada dhinac.
Qorshuhu, wuxuu ahaa in Farmaajo iyo Rooble, isla ogollaadaan, shaqsiga noqonaya Taliyaha NISA, hayeeshee, F&F, oo si weyn kaga careysan sida uu Ra’iisul Wasaaruhu, u wajahay doorashooyinka Gedo, ayaa doonaya in ay garaacaan durbaanka xasarado hor leh, xilli, loo diyaar garoobayo doorashooyinka kraasta ugu sarreeya dalka.
Billowgii todobaadkaan, waxaa soo if-baxay war sheegaya in Taliyaha KMG ah ee hay’adda NISA, eedeysane, Yaasiin Farey, oo ka amar qaata Farmaajo, uu ka dhago adeegay, amarro amni oo ka yimid xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, waxaana jiritaanka warkaas, sii baritaaray fowdada hadda Farmaajo wado.
Sida ay KON, u sheegeen, xubno ka tirsan howl-wadeennada xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Farmaajo, ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay kulamo la lahaa, Fahad Yaasiin, Kullane Jiis iyo Yaasiin Farey, waxayna qorsheeyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan, loo magacaabo baddelka Farey oo xildhibaan noqday.
Ra’iisul Wasaare Rooble, oo hore qayb uga ahaa qorshihii taliska NISA si kumeel gaar ah loogu dhiibay Yaasiin Fareey, ayaan la ogeyn jawaabta uu ka bixin doono, haddii Farmaajo, shaqsi uu isagu keensaday u magacaabo hoggaanka hay’adda, xilli ay soo dhawdahay doorashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Musharixiinta u taagan tartanka xilka ugu sarreeya dalka, ayaa dhankooda, la rumeysan yahay in aysan aqbali doonin in Farmaajo dib u soo nooleeyo saameyntiisii NISA, kadib markii bishii September 2021, laga raacdeeyay xilka ugu sarreeya hay’aadda eedeysane Fahad Yaasiin oo Farmaajo tooshka u sida.
Shaqsiyaadka ku jira liiska Farmaajo, ee uu doonayo inuu u magacaabo Agaasimaha NISA, waxaa ka mid ah, Cabdiraxmaan Dheere, oo ah gacan yaraha Fahad Yaasiin, kaas oo dhawaan waayay kursigii baarlamaanka ee uu ku fadhiyay shanti sano ee la dhaafay, sababo la xariira khilaafka Farmaajo iyo Axmed Madoobe.